DEGDEG: Mid ka mid ah gawaarida qafilan ee AMISOM oo ku gubanaya isgoyska Km4 + Sawirro – Balcad.com Teyteyleey
DEGDEG: Mid ka mid ah gawaarida qafilan ee AMISOM oo ku gubanaya isgoyska Km4 + Sawirro
Isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho waxaa dab ku gubanaya gaari ay leeyihiin ciidamada AMISOM, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxaya sababta keentay inuu gaarigaasi dabka ka kaco.
Sida ay sheegayaan dad goob joogayaal ah gudaha gaariga waxaa ka kacay dab ka dhashay korontada ku rakiban, taasi oo sababtay in ciidamadii saarnaa ay degdeg uga boodaan isla markaana ka gurtaan wixii hub ahaa ee u saarnaa.
Gaarigaan oo ah nooca qafilan ee aanay rasaastu karin ayaa dabka ka kacay wuxuu gebi ahaanba baabi’iyay qalabka gudaha ku jiray ee qaboojiyeyaasha iyo halka laga wado, isla markaana dhaamntiis dabka wada saameeyay.
Dhinaca kale daqiiqado kaddib waxaa goobta soo gaaray ciidamo gurmad ah oo ka tirsan kuwa Dowladda iyo AMISOM, iyagoona xiray nawaaxiga waddooyinka ka dhow halka uu gaariga ku gubanayo, iyagoona bilaabay gurmad lagu daminayo.
The post DEGDEG: Mid ka mid ah gawaarida qafilan ee AMISOM oo ku gubanaya isgoyska Km4 + Sawirro appeared first on Ilwareed Online.
WAXQABADKII 100ka maalin ee Formaajo!